Xa uthengela inja, kufuneka uhlale ukhumbule ukuba le nto ayisayiyiqhawe, yintsana encinane nje inika ithemba. Ukwenza okukhethiweyo, khumbula: intsana evela kubazali bakhe ifumana ulwazi oluthile lwazi, lubekwe kwiqondo lofuzo. Oku kuquka uhlamvu, ukunyamezela, ukunyamekela ekuqeqesheni, inqanaba lomsebenzi wengqondo, inqanaba lokukhathazeka, ukuxhomekeka kwimeko engafanelekanga kwengqondo. Kule nkalo, kufuneka ukhethe ngokukhethekileyo isilwanyana, ukuba injongo yomxholo wayo kukukhusela inja kwiqhawe lomncintiswano. Nika ingqalelo ekhethekileyo kubazali be-puppy-enoba banesistim esomeleleyo esinomdla.
Umbutho wesondlo esifanelekileyo.
Ukuba ulandele onke la macebiso kwaye wakhetha intshontsho nge-heredity efanelekileyo efundisisa ihlabathi elikufutshane naye, nomsebenzi wakho kukuba ukhethe ukutya okulungileyo kwesilwanyana sakho. Iingxabano malunga neengozi kunye neenzuzo zokutya okomile zigcinwa ixesha elide. Ingaba izinja zidla ukutya okumile? Ngakolunye uhlangothi, kulula kakhulu. Ukulungelelanisa ukutya okusemakhaya kwilwanyana lezilwanyana kuyinkqubo enzima, kwaye kuthatha ixesha elide. Ukuqinisekisa ukutya okunokulinganisela kwenja yakho akunzima xa usondla ukutya okulungiselelwe. Akunakufuneka ukuba ulondoloze kwisondlo senja, ingakumbi i-puppy. Izinto ezisebenzisekayo inja ayifumananga ebuntwaneni, ekudala, ayisagcwaliswa.
Intshukumo iqhuba enye yeendima eziphambili kwimfundo yenkxaso yemiboniso. Kuyinto engafanelekanga ukucinga ukuba ukunyuka kukhula kuphela ubunzima besisipha senja. Ukuphuhliswa nokuqiniswa kwesistim se-osseous kuxhomekeke ekuxhomekeke ngokuthe ngqo kwimeko kunye nokuphikelela kwemithwalo yenkukhu ngexesha lokuhamba. Inja kufuneka ihambe njengoko ithanda.
Ukulungele ukuboniswa inja kufuneka iphathe kakuhle kuluntu. Inja kufuneka ikwazi ukufumana rhoqo uqhagamshelana nabantu kunye nezinye izinja. Awukwazi ukushiya intsana kwisitalato yodwa. Nonke ixesha kufuneka ujongane nentshontsho, kwaye ufumane nezinja ezikwazi ukudlala nayo inja. Uqhagamshelwano lwenja kunye nomnini, kunye nomdla emsebenzini - zibalulekileyo iimpawu zobume benkomo yombukiso. Ukuze ukhule inkokheli, inja kufuneka iqhube ngokukhululeka imiyalelo emininzi, njengezona zinto eziyisiseko: "kufuphi", "kum", "indawo", kunye nento ethile, njenge "Isimo". Ukongezelela, inja kufuneka ibe nokuphendula okuzolileyo xa ihlolwe ngokugqithiseleyo ngumbono kwindandatho. Ukusabela kumgca womntu ongaziwayo kufuneka uzinzo.
Iinyanga ezimbini zibudala bebhola, apho kufuneka uqale ukumfundisa izifundo zokuma kwemboniso. Ukuze uqeqeshe, khetha i-flat surface (ungacwangcisa, kodwa umgangatho wayo awufanele udibanise). Ngethuba lesifundo, qiniseka ukuba ii-paws zimi kakuhle - imilenze yangaphambili imele ifane, imva imele ibekwe kumgama wesinyathelo esincinci. Kule meko, inja kufuneka imele, imele ihlale iqonde, ayiyikuzingelwa. Izifundo kufuneka zihambe ngokuthe gqolo, ungalibali - ukwenzela ukuba ukusebenza ngokufanelekileyo kwenkqubo yezilwanyana kufuneka kudunyiswe kwaye uphathwe ngokutya.
Ukuze ulungise umsebenzi kunye ne-rack, kuyimfuneko ukuba ube ne-puppy kunye nesitalato. Ekhaya - kwindawo ekhululekile. Ukuqeqeshwa kwezitrato kuza kwenzeka kwindawo epholileyo, inja iya kuphazamiseka ngeentlobo ezahlukeneyo zesohlwayo, oku kuza kuphakamisa kuyo ukukwazi ukuphazamisa ingqalelo kwimithetho yomphathi.
Unokuqala ukubonakalisa inja kwimiboniso njengebhola, kodwa unokwenza oku ukuba ukulungiswa kuvumela, kunye nenja ilungele imiboniso yengqondo. Kwakhona, ngempilo, inja akufanele ibe neengxaki.
Inja, ibanga indawo yokubonga embonisweni kwaye ixabiswa kakhulu ngabagwebi, kufuneka ibonakale ikhulu. Ukukhula kwintombi yeqhawe elizayo lemiboniso - umsebenzi ochitha ixesha, kuthatha ixesha elininzi, amandla kunye nomonde.
Unokunceda ekulungiseleleni umphathi.
Abaphathi ngabantu abasebenzisa abaninzi abanini bezinja zanamhlanje. Ngokuqhelekileyo umphathi ubonisa amandla enja yokubonisa okungcono kunomnini. Abanikazi bezinja, bathembela kwimbono yobugcisa, banokubonisana nomphathi ukuze bacebise iingcebiso, kwaye emva kokufunda uhlobo lwesilwanyana, uya kunika iingcebiso malunga nendlela yokusebenzisana kakuhle nomnikazi wenja. Ngokuqhelekileyo ngenxa yokungabikho kwexesha kunye nomonde kunye nomnini, yonke inkqubo yokulungiselela inja yombutho womboniso uyayinyamekela. Inkqubo enjalo yokulungiselela ineempawu ezintle. Ukongeza kwinto yokuba inja yakho ilungiswe ngumntu onamava amaninzi kulolu hlobo, umphathi akangabi nexhala kwindandatho, ngelixa umnini ejongene nolonwabo olunamandla oludluliselwa kwinja. Ezi zihlandlo zichaphazela kakubi imifanekiso yonke yomboniso. Ngokukodwa kungenako ukufika ngokufanelekileyo kwimiboniso yezinga elikhulu - kukho nxaxheba ngamnye anikwe imizuzu embalwa nje. Ukuba usasafuna ukumela inja yakho ngokwakho kumboniso, kwaye ngexesha elifanayo ufumane amanqaku aphakamileyo, ekuqaleni, ube ngumbukeli kwintengiso enkulu yenja. Kulapho ungaqhelana nemithetho kwaye uqaphele indlela yokuziphatha ngayo.
Umhlobo Omhle Kakhulu - Chihuahua
Indlela yokwenza izindebe zezinja?
Macrobiotics: isondlo sokuvisisana nokuphila ixesha elide
Iingcebiso zokutya okunempilo kunye nokutya okuvela kuSharon Stone
Isaladi e-spicy yamakhukhamba
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-onyx
Ukuhlamba i-Banana ngokumelene ne-cellulite
I-pizza kunye namaqanda
Indlela yokutya kunye nokukhulelwa okubanzi?
Impawu zokuqala zokukhulelwa okukhuni
Amathandabuzo kumntu othandekayo